သူမ ဒီနေ့မှာ အဓိဌာန်ပြုပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ အရာလေးတစ်ခုက အောင်မြင်သွားတဲ့အကြောင်းကို ဝမ်းသာအားရနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်ချမ်းချမ်း – Cele Top Stars
September 11, 2021 By admin2Knowledge
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ချမ်းချမ်း ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်း များစွာရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမက အချစ်သီချင်းတွေသာမကပဲ အဆွေးသီချင်းတွေကိုလည်းစိတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ချမ်းချမ်းဟာ လက်ရှိမှာဆိုရင် ခင်ပွန်းသည်ရှိရာအီတလီမှာသွားရောက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်…။
အဆိုတော်ချမ်းချမ်း ကတော့ မြန်မာပြည်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ သမီးကြီးကိုလည်း လွမ်းနေရင်း သမီးငယ်လေးအပေါ်မှာလည်း အရမ်းကိုချစ်ပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ချစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း သမီးငယ်လေးရဲံချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်. အီတလီမှာနေထိုင်နေပေမယ့် ချမ်းချမ်းက အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအ‌တွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ သတင်းပြန့်နေတဲ့ D Dayကြောင့် ပြည်သူတွေဘက်က တိုက်ခိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်. ..။
ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားဖြည့်နေကြာတဲ့အထဲမှာ ချမ်းချမ်းတစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ပါနော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့ ချမ်းချမ်းက ” စက်ဘီးစီးတတ်သွားပြီ ဒီနေ့ သူများတွေအတွက် မထူးဆန်းပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲ.. အဓိဌာန်ပြုပြီးကို စီးသင်တာနော်..စခတွေကို နိုင်ပါရစေသား ဆိုပြီးသင်တာ.. ၂ ပတ်မှာ စီးတတ်သွားပြီ ” ဆိုပြီး ပျော်ရွင်စွာရေးသားပြီး Myday မှာတင်လာခဲ့ပါတယ်။ ချမ်းချမ်းလိုပဲ ပြည်သူအားလုံးဒီလိုမျိုး နိုင်ချင်စိတ်လေးရှိနေမှာ အသေအချာပပဲနော်.. ပရိသတ်ကြီးလည်း ချမ်းချမ်းလို သစ္စာဆိုပြီး အောင်မြင်ကြပါစေနော်…။
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော ခမျြးခမျြး ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတျဒိတျကြဲ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှုကိုလညျး မြားစှာရရှိထားတဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဆယျစုနှဈတဈခုကွာ အနုပညာအလုပျတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျခဲ့တဲ့ သူမက အခဈြသီခငျြးတှသောမကပဲ အဆှေးသီခငျြးတှကေိုလညျးစိတျခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီဆိုလရှေိ့တဲ့သူတဈယောကျပါ။ အခုလိုအောငျမွငျမှုတှရေရှိခဲ့တဲ့ခမျြးခမျြးဟာ လကျရှိမှာဆိုရငျ ခငျပှနျးသညျရှိရာအီတလီမှာသှားရောကျနထေိုငျနတောဖွဈပါတယျ…။
အဆိုတျောခမျြးခမျြး ကတော့ မွနျမာပွညျမှာကနျြခဲ့တဲ့ သမီးကွီးကိုလညျး လှမျးနရေငျး သမီးငယျလေးအပျေါမှာလညျး အရမျးကိုခဈြပွီး အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ ခဈြနတော ဖွဈပါတယျနျော..တဈခါတဈလမှောလညျး သမီးငယျလေးရဲံခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေိုလညျး ပရိသတျကွီးအတှကျ တငျပေးနကွေဖွဈပါတယျ. အီတလီမှာနထေိုငျနပေမေယျ့ ခမျြးခမျြးက အခုလကျရှိမွနျမာပွညျမှာတှကွေုံ့ခံစားနရေတဲ့ စဈဘေးရှောငျပွညျသူတှအေ‌တှကျ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ တဈတပျတဈအားပါဝငျကူညီနတောဖွဈပါတယျ။ ဒီရကျပိုငျးမှာ သတငျးပွနျ့နတေဲ့ D Dayကွောငျ့ ပွညျသူတှဘေကျက တိုကျခိုကျဖို့အဆငျသငျ့ဖွဈဖို့ကွိုးစားနကွေတာ ဖွဈပါတယျ. ..။
ပွညျသူတှဘေကျကလညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အားဖွညျ့နကွောတဲ့အထဲမှာ ခမျြးခမျြးတဈယောကျလညျး အပါအဝငျပါနျော.. ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ခမျြးခမျြးက ” စကျဘီးစီးတတျသှားပွီ ဒီနေ့ သူမြားတှအေတှကျ မထူးဆနျးပမေဲ့ ကိုယျ့အတှကျတော့ အောငျမွငျမှုတဈခုပဲ.. အဓိဌာနျပွုပွီးကို စီးသငျတာနျော..စခတှကေို နိုငျပါရစသေား ဆိုပွီးသငျတာ.. ၂ ပတျမှာ စီးတတျသှားပွီ ” ဆိုပွီး ပြျောရှငျစှာရေးသားပွီး Myday မှာတငျလာခဲ့ပါတယျ။ ခမျြးခမျြးလိုပဲ ပွညျသူအားလုံးဒီလိုမြိုး နိုငျခငျြစိတျလေးရှိနမှော အသအေခြာပပဲနျော.. ပရိသတျကွီးလညျး ခမျြးခမျြးလို သစ်စာဆိုပွီး အောငျမွငျကွပါစနေျော…။
စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ညမှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် ၀မ်းနည်းစွာငိုကြွေးနေတဲ့ ရတနာမိုင်